Woqooyiga Dakota WIC | JPMA, Inc.
Haweenka, Dhallaanka & Carruurta (WIC)
Barnaamijka Nafaqada Dheeraadka ah ee Gaarka ah
North Dakota WIC waxay rabtaa inay aragto qoyskaaga oo faraxsan, caafimaad qaba oo barwaaqaysan. Waxaan kaa taageereynaa uurka ilaa dhalashada iyo ilmahaaga laga bilaabo cunug ilaa iyo dhalashada 5aad ee ilmahaaga
Talooyin iyo Su'aalo
Q: Miyay tahay in aan helo dhammaan cuntooyinka WIC?
A: Maya, maahan xad-gudub haddii aad doorato inaad iibsato wax ka yar ama midkoodna cuntooyinka WIC ee laguu qoray.
Q: Miyaan beddeli karaa cuntooyinka aanan u isticmaalin cunto kale?
A: Dhowr bedel ayaa loo oggol yahay cuntooyinka qaarkood. La xiriir wakaaladda deegaankaaga ee WIC si aad ugala hadasho waxyaabaha kuu banaan iyo in gargaarkaaga cuntada wax laga beddelo. Dukaanka wax beddel ah lagama sameyn karo.
Q: Miyaan cuni karaa cuntooyinkayga WIC ama cunugayga cunugayga WIC ee xubnaha kale ee gurigayga?
A: Cunnada WIC waxaa loogu talagalay oo keliya qofka magaciisa ku qoran jeegagga. Haddii kuwa gurigaaga ka tirsan ee qaata jeegagga WIC aysan cunin wax cunto ah oo ay WIC bixiso, ama ha ka helin bakhaarka ama weydii shaqaalaha hay'adda maxalliga ah inay ka saaraan jeegagaaga.
Q: Maxaan sameeyaa haddii aan dhimo ama joojiyo naas nuujinta?
A: La xiriir wakaaladda deegaankaaga ee WIC. Waxaad la kulmi doontaa nafaqo-yaqaan kaalana hadli doona waxyaalaha aad heli karto.
Q: Macaashyadeyda miyuu ku dhacayaa bisha xigta haddii aan la isticmaalin?
A: Maya. Dhamaan faa'iidooyinka cuntada ee WIC ee aan iibsan bishaas ma sii wadi doonaan bisha xigta.
Soo hel xafiiska WIC
Isticmaal "Soo hel xafiiska WIC”Badhanka barnaamijka WICShopper. Waxaad kaheli kartaa tilmaamaha rugtaada caafimaad isla markaana aad uga wacdaa isla barnaamijka.
Soo hel WIC dukaanka
Isticmaal "Dukaamada WIC”Badhanka ku jira barnaamijka WICShopper.
Raadi “Nambur-bixiye Idil Wats North DakotaCalaamad.
Talooyin Ku Saabsan
Keen dukaankaaga WIC jeegaga iyo galka WIC.
Alaabta iskaan kujira barnaamijka WICShopper si loo hubiyo inay uqalmayaan Waqooyiga Dakota WIC. Xusuusnow inaad xaqiijiso inaad dhab ahaantii hayso cuntooyinka ku daabacan jeegaga kahor iibsiga sheyga!
Adeegso Liistada Raadinta ee WIC ee Waqtiga Wanaagsan (AFL) ee WICShopper (ama nooca aad daabacan tahay) si aad u aragto cuntooyinka WIC ee aad iibsan karto.
Waxyaabaha Suuq-geynta ah
Q: Waxaan iskaaniyay qaar ka mid ah cuntooyinka ama waxaan galiyay nambarka UPC oo waxaan arkay farriimo kala duwan. Maxay uga jeedaan?
A: Farriimaha waa:
Oggol - Shaygaani waa WIC ogolaaday! Hal shay oo ah in la ogaado waa inaad arki kartaa shay la oggol yahay, laakiin ma ahan qayb ka mid ah dheefahaaga cuntada ee WIC, marka ma iibsan kartid WIC. Tusaale ahaan, cunug hal sano jir ah ayaa hela caano dhan. Haddii aadan ku haysan cunug hal sano jir ah qoyskaaga, caanaha oo dhan kama mid noqon doonaan faa'iidooyinkaaga cuntada WIC, mana awoodi doontid inaad ku iibsato caanaha oo dhan diiwaangelinta. Ilaa faa'iidooyinka WIC ay ku xirmaan barnaamijka WICShopper, farriintan "la oggol yahay" waxaa laga yaabaa inaan lagu dabakhin dheefaha qoyskaaga.
Ma aha wax WIC ah - Tani micnaheedu waa North Dakota WIC ma aysan ansixin shaygan. Haddii aad u maleyneyso inaad ku iibsan karto cunnadan faa'iidooyinka cuntada ee WIC, noo soo sheeg adigoo adeegsanaya “Tani ma iibsan karto!"Button ee app this.
Lama ogaan karo - Tani macnaheedu waa appku ma go'aamin karo haddii sheyga u qalmo WIC. Tani waxay u dhici kartaa iyada oo aan lahayn isku xirnaan dukaanka. Isku day inaad ku xirnaato WiFi ama ka raadsato meel bakhaarka aad ka hesho adeeg fiican.
Q: Waxaan isku dayay inaan iskaan miro iyo khudaar daray ah. Ama iyagu ma iskaan ama waxay u yimaadaan sidii aan loo oggolayn. Sababta
A: Appku ma baari karo barcado gaar ah miraha cagaaran iyo khudradda ama mararka qaarkood dukaamada waxay adeegsadaan baakado ay iyagu leeyihiin.
Waan iibsan kari waayey tan!
Q: Goorma ayaan isticmaali doonaa, "Tani ma iibsan karto!"? Maxay tahay?
A: "Tani ma iibsan karto!"Waxay kuu oggolaanaysaa inaad u sheegto WIC marka sheyga cuntada aad isku dayeyso inaad iibsato waxaa diidaya diiwaanka. Markaad isticmaasho, "Tani ma iibsan karto!”Barnaamijka WICShopper, wakaaladda gobolka WIC ayaa heli doonta ogeysiis. Hay'adda gobolka WIC ayaa dib u eegi doonta dhammaan walxaha la soo gudbiyey waxayna la shaqeyn doontaa dukaamada si ay uga dhigaan cuntooyinka la oggol yahay inaad adigu hesho!
Liiska Cunnada ee la ansixiyey
Liiska Cuntada WIC ee Waqooyiga Dakota
Afeef iyo Kala-takoorid
Hay'addani waa bixiye fursado loo siman yahay. (dhagsii iskuxirka bayaanka cadeynta takoorida ee WIC)